Madaxweynaha cusub ee dalka Tazania iyo Haweenayda Ku Xigeenka u ah oo xilka loo dhaariyay |
Madaxweynaha cusub ee dalka Tazania iyo Haweenayda Ku Xigeenka u ah oo xilka loo dhaariyay
Madaxweynaha cusub ee Tanzania, John Magufuli ayaa loo dhaariyay xafiiska madaxtinimada khamiistii shalay, inkastoo weli uu muran ka taagan yahay doorashadii uu ku guuleystay ee 25-kii October ka dhacay dalkaas.
John Magufuli iyo ku xigeenkiisa, Samia Suluhu Hassan oo noqotay haweeneydii ugu hor-reysay ee madaxweyne ku xigeen ka noqota dalkaas, ayaa lagu hor dhaariyay shacab fara badan, waxaana lagu dhaariyay garoonka Uhuru Stadium ee magaalada Dares- Salaam.
Dhaarinta kaddib ayuu madaxweynaha cusub ee dalka Tanzania wuxuu halkaas ka jeediyay khudbad gaaban taasoo uu ku ballanqaaday inuu dadaal u galayo sidii uu u fulin lahaa dhammaan waxyaabihii uu ballan-qaaday intii aan la dooran.
Magufuli ayaa sidoo kale ka codsaday shacabka Tanzania inay midoobaan isagoo sheegay inay dhammaantood wada guuleysteen, maadaama doorashadu ay ku dhacday si nabdoon.
Xafladda lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Tanzania iyo haweeneydan u ah ku xigeenka ayaa waxaa ka qayb-galay madax badan oo Afrikaan ah kuwaas oo uu ku jiro madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta.
Ugu dambeyn, murashaxa ku guuleystay doorashada ayaa ka socday xisbiga talada dalkaas haya, iyadoo natiijadii doorashada kasoo baxday ay diideen mucaaradka dalkaas, ayna ku tilmaameen mid la musuq-maasuqay.